ဂရေးမားကက် (Gray Market) ဆိုတာဘာလဲ? – Digital Photography Myanmar
HomeBasic Photographyဂရေးမားကက် (Gray Market) ဆိုတာဘာလဲ?
June 26, 2016 Zaw Basic Photography 0
ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ တယောက်ဟာ နိုင်ငံဒေသတစ်ခုအတွက် သူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကို တင်သွင်းရောင်းချပြီး အထောက်အပံ့ပေးသူ တစ်ဦးကိုသာ အများအားဖြင့် ထားရှိလေ့ရှိပါတယ်။ ၎င်း၏တင်သွင်းရောင်းချသူမှာလဲ distribution channel သို့မဟုတ် ဖြန်ဖြူးရေးလမ်းကြောင်းခေါ် နေရာဒေသငယ်များအလိုက် ရောင်းချဖြန့်ဖြူးသူများထားရှိပါတယ်။ ဂရေးမားကက်ဆိုတာ အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ ဖြန်ဖြူးရေးလမ်းကြောင်းတွေမဟုတ်တဲ့ လမ်းကြောင်းတွေပေါ်က ကုန်ပစ္စည်းတွေပါ။
နိုင်ငံဒေသအလိုက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ FCC, CE, UL အစရှိတဲ့ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး သတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ်လက်မှတ်တွေနဲ့ အစိုးရရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ သက်ဆိုင်ရာဘာသာစကားဖြင့် မန္နူရယ်ရေးသားထားခြင်း၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ လျှပ်စစ်ကြိုးနှင့်ခေါင်းပါရှိခြင်း အစရှိသည်တို့အပြင် တခြားသတ်မှတ်ချက် code တွေကိုလိုက်နာရန်အတွက် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများဟာ နိူင်ငံအလိုက်ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးမှုကို ခွဲခြားထားရပါတယ်။ ထို့အပြင် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူနှင့် နိုင်ငံဒေသအလိုက်တရားဝင်တင်သွင်းခွင့်ရသူများကြားမှာထားရှိတဲ့ အထောက်အပံ့ပြုလုပ်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်တွေလဲရှိပါတယ်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ရဲ့ ဂရေးမားကက်ပစ္စည်းတွေဟာ ၎င်းနိုင်ငံရဲ့ဈေးကွက်အတွက် ထုတ်လုပ်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အန္တာရာယ်ကင်းရှင်းရေးလက်မှတ်တွေမပါရှိသလို တရားဝင်တင်သွင်းသူကလည်း၎င်းပစ္စည်းကို တာဝန်မယူနိုင်ပါဘူး။
နိုင်ငံတကာနယ်ခြားစောင့်စဉ်းမျဉ်းတွေပွင့်လင်းလာပြီး အင်တာနက်မှရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေများပြားလာတာနဲ့အမျှ မှတ်တမ်းကောင်းကောင်းမရှိတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေ နိုင်ငံတွင်းကိုဝင်ရောက်လာပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ဂရေးမားကက်ပစ္စည်းတွေကို သုံးစွဲမှုဟာလဲကျယ်ပြန့်လာပြီး သုံးစွဲသူတွေကလည်း ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူမိကြပါတယ်။
ဂရေးမားကက်ကပစ္စည်းတွေဟာဈေးပေါပါတယ်။ ဒီတော့ဝယ်သူတွေအတွက်ဝယ်ဈေးပေါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝယ်ဈေးပဲပေါတာပါ။ ၎င်းပစ္စည်းကိုတာဝန်ယူ ပြင်ပေးမယ့်သူမရှိတာကြောင့် ရေရှည်မှာကုန်ကျမှု ပိုများပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဂရေးမားကက်ပစ္စည်းတွေမှာ ဝရန်တီမပါတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံအလိုက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ service center ကတာဝန်ယူပါလိမ့်မယ်။ ဂရေးမားကက်ပစ္စည်းကို တင်သွင်းသူကိုသာဆက်သွယ်လိုက်ပါ။